Poster misy tariby ivelany tsara indrindra, Poster vita amin'ny jiro ivelany, Poster Led Led offter, mpanamboatra efijery mpanamory ivelany any Sina
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Poster Led Outdoor,Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany,Out Poster Led Led Mobile,Ny efijery fanantonana ivelany,,
Home > Products > Led Kiosk Poster
Ny vokatra avy amin'ny Led Kiosk Poster , mpanofana manokana avy any Shina, Poster Led Outdoor , Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Out Poster Led Led Mobile R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fivoahana tampoka eo amin'ny sainam-pirenena LED
Shina Led Kiosk Poster mpamatsy
Kiosk efijery ivelany arak'asa ho toy ny afisy mitarika dia mahomby sy mahaliana maso azo apetahana araka ny takian'ny fangatahana. Afisy miorina eo ivelany na kiosk fitarihan'ny efijery ao anaty fitoeran-javaboary misy manana mpilalao miorina mifandraika amin'ireo efijery izay azo havaozina avy amin'ny toerana lavitra izany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko misy sonia. Ity takelaka ity dia azo ampiasaina amin'ny fiarahabana ny vahiny, ny dokambarotra vokatra ary ny fanaparitahana ny fampahalalana manan-danja mifandraika amin'ireo mpijery azy.
Ny efijery ivelany ivelany Kiosk dia afaka mifandray mifandraika maro. Azo ampiasaina amin'ny dokam-barotra ny takelaka fitarihana izay, fa koa ny fampahalalana sy ny asa hafa toa ny fitrandrahana an-tserasera, ny fandoavana volavolan-dalàna, ny fiantsenana, sns.
Ny efijery fanantonana ivelany